I-Semalt Shares "I-Google Bhizinisi Lami" Okusemqoka Wonke ama-SEO Champion Kufanele Awazi
Izinkampani eziningi zinamahhovisi omzimba nezingosi ze-e-commerce. Ukukhuthaza amakhasimendeukuthenga ngesitolo sangokwenyama kubalulekile ekwenzeni ngcono izimali zokuthengisa. Futhi, usebenzisa inqubo yokusesha Engine Optimization (SEO)ukuthuthukisa ithrafikhi yamakhasimende kwandisa amanani okuthengisa. I-Google isungule uhlelo lokusebenza olugcwele uhlelo oluthuthukisa ukuphathwa kwebhizinisiulwazi lendawo. Uhlelo lokusebenza lungatholakala ngokusebenzisa inqubo yokucinga ye-Google elula - monitoreo web gratis.
uFrank Abagnale, iMenenja yokuPhumelela kweKhasimende i-Semalt Amasevisi weDividal, inikeza incazelo ye-app ukuze usebenzise ngokugcwele izici zayo.
Izici ze-Google Bhizinisi Lami Lokusebenza Lokusebenza:
Umsebenzisi uyakwazi ukuphatha izindawo eziningana zebhizinisi usebenzisa ideshibhodi eyodwa.
Umnikazi webhizinisi angashintsha igama, ikheli, namahora okusebenza ebhizinisi.
Umsebenzisi angahlaziya futhi aphendule ukubuyekezwa kwamakhasimende ngohlelo lokusebenza.
Ukubuyekeza izithombe nokuthunyelwe kwenziwa lula nge-platform ye-Google +.
Isici sezinga eliphezulu se-analytics sithuthukisa ukubonakala kwe-inthanethi nokubandakanya kwamakhasimende.
Uhlelo lokusebenza olusungulwe kabusha lwe-Google Bhizinisi Lami lunezici ezengeziwe ezikhangayokumnikazi webhizinisi. Lezi zakhono ezengeziwe zifaka:
Hlola ukuthi ibhizinisi likhonjiswa kanjani ku-Google +, Google Maps, nokuseshwa kwe-Google.
Hlola ukuhlaziya okusebenzayo okwenziwa yi-Google +.
Finyelela impendulo eningiliziwe ngokubuyekezwa kwamakhasimende nokwaziswa kwendawo.
Phatha izindawo nganoma isiphi isikhathi..
Khombisa izindawo zendawo kanye nekheli leposi lezinkampani ezisebenza ngokukhawulelwe.
Uhlelo lokusebenza lwe-Android luyatholakala ku-Google Play. Futhi, uhlelo lokusebenza lwe-iOS lungalandwakusuka ku-App Store ye-Apple. Kumahhala ukulanda noma ukuthuthukisa uhlelo lokusebenza lwe-Google Bhizinisi Lami. Uhlelo lokusebenza olusha lwe-Google Bhizinisi Lami luhlanganisa ne-SEOamagama angukhiye, uhlelo lokusebenza lwe-YouTube, nohlelo lokusebenza lwe-Google Analytics, ukuhlanganisa idatha noma ulwazi oludingekayo ukuthola ulwazi lwendawo entsha.
Ukuqonda iGoogle Ibhizinisi Lami
Isigaba sokubuka konke se-Google Bhizinisi Lami sibonisa izici ezibalulekile zohlelo lokusebenza.Ikhasi losizo le-Google Bhizinisi Lami inikeza ulwazi oluwusizo mayelana nokusebenzisa uhlelo lokusebenza. Azikho izindleko ezihilelekile uma usebenzisa uhlelo lokusebenza. Kudinga kuphelaisikhathi nomzamo wokubuyekeza idatha womsebenzisi. Umnikazi webhizinisi enezindawo eziningana kufanele abeke phambili izindawo eziphezulu ngokusekelwe emaliniukubaluleka noma izinzuzo zamasu. Izindawo zingalayishwa ngokweqile noma ngobuningi besebenzisa ispredishithi uma zingaphezu kuka-10. Ibhizinisiumnikazi kufanele athuthukise i-Akhawunti yeBhizinisi uma izindawo zilawulwa abantu abaningana.
Ukuthuthukisa Usesho Lendawo
Ukusesha kwendawo kuhilela inqubo ye-SEO. Iningiliziwe kakhulu kune-Google eyisisekelo,Ukusesha nge-Bing, ne-Yahoo. Ukusesha kwendawo kudala imiphumela ngokusebenzisa izinhlelo zokubala; isibonelo, i-Google Maps, i-Apple Maps, i-Foursquare,Amakhasi aphuzi, no-Advisor Advisor. I-SEO ithuthukisa ukubukeka kwebhizinisi kanye ne-intanethi yamakhasimende we-intanethi. Kuhilela ukusabalalisa idatha ebalulekileamakhulu emasayithi e-intanethi. Ukuthuthukisa inqubo yosesho yendawo kudinga ispredishithi yeproofthiwe ethuthukile njenge-Google Bhizinisi Lami. Kuyinto esemqokasearch engine online emhlabeni wonke. Ipulatifomu ephezulu yebalazwe yohlelo lokusebenza ibalulekile ekuthuthukiseni usesho lwendawo ezindaweni zebhizinisi.
Uhlelo lokusebenza lwe-Google Bhizinisi Lami luwusizo ekwenzeni ngcono ukubonakala kwe-inthanethi kwebhizinisi.I-traffic yamakhasimende izohlala iphezulu kumawebhusayithi ebhizinisi ane-inthanethi enkulu khona. Inhloso eyinhloko yimuphi umnikazi webhizinisiukukhiqiza izindinganiso eziphezulu zokuthengisa kusuka kumakhasimende avakashela amasayithi e-intanethi.